Xeryaha Qaxootiga ee Dhadhaab oo ay Xaaladoodu Kacsan Tahay – Rasaasa News
Xeryaha Qaxootiga ee Dhadhaab oo ay Xaaladoodu Kacsan Tahay
Aug 18, 2010 dambiile, ethiopia, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF
Hal kudhaga sanadkan Jwxo-shiil “ma doonayo in ay nabad ka dhacdo Ogadeeniya waligeed “BBC.” – Waxaa xerayaha Qaxootiga ee Dhadhaab dhooban dhalinyaro hore uga tirsanaan jiray cwxo, ee dagaalka adag kula jiray dawlada Itobiya. Dhalinyaradan ayaa waxay ku yimaadeen xeryaha qaxootiga laba arimood, laga bilaabo 2007 tan iyo bilowgii sanakan.
qaybta hore ee Cwxo, ayaa waxaa intooda badan keentay xeryaha Qaxootiga ee Dhadhaab dhibaato ay u gaysteen taliyeyaal uu samaysta Jwxo-shiil, intii ayna Jabhadu kala furfurani. Dhalinyaradan ayaa dhibaatooyinka loo gaystay waxaa ka mid ahaa qabyaalad si xun loogu dhaqay iyo iyaga oo sixun oo ka baxsan nidaamka halganka loola dhaqmay.
Waxaa jirtay in 12ka mid ah dhalinyaradan oo ahaa masuuliyiin cwxo, in hal maalin uun loo sheegay in ay xilkii ay jabhada u hayeen dhigaan, sabab la,aan, lana geeyey xadka Somaliya loona sheegay in ayna ku soo noqon karin Jabhada. Qaar ka mid ahaa dhalinyaradan ayaa diiday oo yidhi sabab ha naloo sheego, kuwaas waa la toogtay, Eebe ha u naxariistee.
Sida ay sheegeen dhalinyaradan, waxaa uu Jwxo-shiil, ka cabsaday in ay dood ka keenaan khaladaadka uu ku samaynayey halganka. Dhalinyaradaas waxaa lagu badalay dhalinyaro uu Jwxo-shiil, ka soo diray Eritrea oo ay kuligood isaga la reer yihiin. Dhaliyaradaasi waxay in badan ciil iyo cadho la joogeen xeryaha qaxootiga ee Kenya.
Qaybta 2aad, ee cwxo ee jooga xeryaha qaxootiga ayaa ah kuwo soo galay kolkii gudaha laggaga soo adkaaday yimidna iyaga oo habqan ah.
labadan ciidan waxay wada joogaan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, waxaana awal hore gaban jiray ciidankii hore u soo galay, waayo waxay u arkayeen dhalinta cusub in ayna waxba iyaga u gaysan, ee dhibka ay gaysteen Jwxo-shiil iyo kuwa uu masuuliyiin ka dhigtay.
Xiligan xaaladii jirtay way isbadashay cwxo ee ciilka u qabay Jwxo-shiil iyo kuwa la jira, waxaa xeryaha qaxootiga ugu tagay qaybtii ONLF ee ay taageersanaayeen oo xiligan nabad qaatay.
Waxaa kale oo xeryaha Qaxootiga yimid Cabdi Cabdulahi iyo kuwo hore u ahaa taliyeyaal uu ku adeegto, oo ah ragii dhibaatooyinka u gaystay. Waxayna qaar ka mid ah cwxo, dhaar ku mareen in Cabdi Cabdulahi uusan nabad ku joogaynin dalka Kenya dhibaatadii uu u gaystayna ayna wali iloobin.
Xeryaha Qaxootiga ee dhadhaab habeen walba waxaa ka dhaca gacanqaad u dhaxeeya dhalinyaradii ka tirsanaan jirtay cwxo, kuwaas oo uu colaad ka dhex abuuray Jwxo-shiil. Xaalada cadho ee u dhaxaysa dhalinyarada xeryaha qaxootiga jooga ee hore uga tirsanaan jiray cwxo, ayaa aad u xun.
Gacanqaadyadan ka dhacay xeryaha Dhadhaab ayaa dad dhawr ah ay Isbitaal u yaalaan, oo waliba ay xaaladoodu liidataa xiligan.
Gacanqaadyadan ayaa waxaa amaray Jwxo-shiil, waxaana uu u sheegay taageerayaashiisa meel walba oo ay joogaan in ay dagaal ka ridaan, kuna qaadaan dadka ka horjeeda Jwxo-shiil.
Qaar ka mid dhalinyarda uu lugooyey ee ku nool dibadaha ayaa waxay ku xidhan yihiin, qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka, kuwaas oo aan wax mustaqbal ah ku lahayn dalalka ay joogaan.
Xaaladan ayaa hadii ay sii socoto waxaa ay keeni doontaa colaad dhex martay beelo, aan waxba isu qabin oo walaalo ah, hadii aan laga hortagin qoriga dabka ah ee uu la ordayo Jwxo-shiil.
Warar Sir ah iyo Dagaal ka Dhextaagan Kooxda Jwxo-shiil
Arday Maxaabiis ah oo ka Qalin Jabiyey Jaamacada Jijiga